Ny Fomba Tsara indrindra mba Hihaona rosiana ny Tovovavy ho an’ny Fanambadiana
Akaiky ny fito miliara ny mponina dia miaina amin’izao fotoana izao ao amin’ny Tany. Izy rehetra ireo dia efa samy hafa volon-koditra, ny endriky ny maso sy ny volo mihasimba raha monina amin’ny kaontinanta samihafa sy ny manana isan-karazany ny fivavahana. Eny, ny maha samy hafa ny olona dia hita miharihary fa iza no nanapa-kevitra fa endrika ivelany no resaka. Amin’izao fotoana izao dia be ny elanelana misy eo amin’ny roa samy hafa ny kaontinanta sy ny fotoana faritra na inona na inona izay kely bump teo amin’ny fiainany ny lalana. Isaky ny andro maro ny olona hanao fanapahan-kevitra nanjavozavo ny zavatra nosoratany rehetra ny andalana ho lasa sambatra kokoa iray. Isan-taona dia maro ny fanambadiana mampitombo, ny olona samy hafa firenena fa mitovy ny fomba fijery sy ny faniriantsika hanao ny fianakaviana matanjaka. Be dia be ny Tandrefana ny lehilahy tia vehivavy rosiana ho an’ny fanambadiana ary tsy nampoizina mihitsy aza ho an’ny Tandrefana ny vehivavy satria tsy tahaka ny azy ireo rosiana ny ankizivavy no tena fianakaviana-mirona. Amin’izao fotoana izao Tandrefana maro ny vehivavy te-ho mahaleo tena, manao akanjo aina tsy manao kely make-up, ho mahomby eo ny asa, travel ary aza t hamatotra ny tenany miaraka amin’ny ankizy ary voafetra ny vadiny. Misy fotsiny ny tolona ho amin’ny fitovian’ny lahy sy ny vavy sy ny fomba fijeriny ny vehivavy tao am-ratsy ny fomba firesany. Maro Western ny vehivavy dia tsy miankina sy ny olon-tsotra-mitady sy ny tsy ara-nofo dia ao amin’ny telo-polo. Ny olona tsirairay dia hunter tamin ny natiora izay te-handresy ny fon’ny manan-tsaina hatsaran-tarehy. Rosiana ankizivavy tsy nahy miezaka ny hijery ny tsara indrindra sy mba hisarihana ny olona s ny saina. Tsara tarehy izy ireo, ny toetra sy fotsiny izy ireo hanasongadinana ny manao endri-javatra na dia kely make-up sy ny mahay mifidy akanjo amin’ny alehany rehetra izay manasongadina tombontsoa ny olo-malaza sy tsy dia manan-danja izay izy dia handeha ho any amin’ny toeram-piasana, ny toeram-pivarotana lehibe na ny sakafo hariva, izy fotsiny no miova ny manao ny ho avy ny fotoana fa toa lehibe ny fotoana rehetra. Raha te-hanana ny vadiny tsara tarehy rosiana zazavavy fa ny fanambadiana dia ny tsara indrindra variant. Ara-tantara ny lehilahy no lohan’ny fianakaviana ho an’ny vehivavy rosiana, ary na dia ankehitriny aza, rehefa ny fiaraha-monina dia efa niova, ny vehivavy, dia aoka ny lehilahy manjakazaka amin’ny fanontaniana maro dia maro. Izy mahay hanafina ny hery anaty ny fahalemena sy ny frailty. Vehivavy aingam-panahy ny olona miavaka amin’ny lalitra sy ny hahatonga azy ireo hahatsapa tena mahery ary zava-dehibe. Felinity sy ny hatsarany dia ny toetra mampiavaka ny rosiana ankizivavy. Raha manapa-kevitra ny hanambady rosiana ankizivavy iray ho vonona ny ho tena manahy be loatra momba izany. Amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, Tandrefana vehivavy tia manatanteraka ny asa, ny fahombiazana, ary tsy tena miankina fa tsy feno ny fianakaviana izay mety ho afaka hisorohana ny fitomboana. Ny ampahany lehibe amin’ny rosiana ny vehivavy dia nahita fianarana tsara ary miezaka ny hahita asa tsara amin’ny asa fitomboana ao amin’ny ho avy, fa afa-tsy izany, dia ho fianakaviana iray sy goavana manambatra ireo anjara asa manan-danja. Rosiana vehivavy dia tsy ho sambatra tanteraka raha tsy misy ny fianakaviana (malala vadiny sy ny ankizy) na inona na inona ny asa mahomby izy, dia foana ny nanorim-ponenana tany. Raha te-hanambady ny rosiana ny vehivavy sy ho mafy orina ny fianakaviana fa tsy fantatrao izay mitady azy, afaka tanteraka ny hanombohana ny fikarohana sasany dia ny mampiaraka toerana. Afaka fotsiny miditra ao amin’ny fikarohana bar rosiana zazavavy online raha mitady tovovavy ny faha-roapolo taonany na vehivavy rosiana an-tserasera raha te-hahita kely zokiny iray. Izany afaka manampy anao hahatakatra ny rosiana vehivavy tsara kokoa, ary mandany ny fotoana amin’ny fahafinaretana miresaka amin’ny hatsaran-tarehy. Mampiaraka toerana no tena malaza fomba mba hahita ny tovovavy rosiana monina ao Rosia, na ao amin’ny hafa firenena fotsiny amin’ny alalan’ny fampiasana ny aina fitaovana mifandray amin’ny aterineto. Raha maro ny rosiana ny vehivavy dia nahita fianarana tsara ary mahay ny teny anglisy ianao dia afaka mora mifandray amin’ny azy ireo mivantana. Koa, afaka mitsidika ny sasany rosiana any am-pielezana ao an-tanàna mba hitady rosiana vehivavy sy hahafantatra azy amin’ny olona. Saika ny rehetra ny firenena sy ny tanàna lehibe manana ny faritra izay rosiana ny olona velona, toy ny Brighton Amoron-dranomasina any Brooklyn, New York, na San Diego tany Los Angeles, California. Raha toa ianao efa nahita ny sasany rosiana mampiaraka ny vehivavy ary efa niresaka tamin izy ireo nandritra ny ora maro ary ireo izay tena te-hahita ny olona mba hahafantatra tsara azy ireo, ary angamba na dia hanambady ny anankiray amin’ny vehivavy rosiana fa mampiaraka amin’ny hoavy, dia afaka maka ny fitetezam-paritra mitsidika Rosia, na ny sasany amin’ireo firenena hafa. Afaka maka ora maro sy ho lasa tena nahafinaritra mampientam-po. Ianareo dia ho afaka ny hianatra ny kolontsainy, tsidiho ny toerana samy hafa, ary angamba aza maka ny tsara indrindra dia iray indray miaraka aminao. Ianao ihany no mila ho lasa ambanin-javatra ny fisalasalana, ary hanao dingana ho amin’ny andro ho avy amin’ny tena tonga lafatra ny ampakarina. Raha toa ianao mihevitra fa sarotra ny manao ny ankizivavy raiki-pitia, ianao mety tsy mahalala fa misy ny sasany ankapobeny fitsipika izay afaka manampy anao eo amin’ny toe-javatra toy izany. Inona araka ny hevitrao no zava-dehibe ho an’ny rosiana ny tovovavy ho an’ny mampiaraka? Toy ny rehetra ny tovovavy rosiana zazavavy tia amin’ny sofina, ka ianao dia tsy tokony ho chary fiderana, indrindra fa raha tena manana zavatra lazaina momba ny saina, na hiatrika ny endri-javatra. Ankizivavy mankasitraka mampamangy, fa tsy t lazao izy rehetra indray. Tandremo ny endri-javatra manokana ao ny tarehimarika na tsaratsara kokoa any ny tiany sy ny fahalalam-pomba.
Miezaha hahafantatra ny zava-mahaliana azy, ny zavatra tiany sy tsy tiany, mahita ny sasany mahazatra ny hevitra sy maka fahafinaretana avy mifanakalo hevitra momba azy ireo. Rehefa azo antoka fa ianao no vonona ny miantso azy tamin’ny alalan’ny skype, ohatra, dia aza misalasala ny hanao izany. Tonality sy ny vatana fiteny afaka manome anao na dia fanazavana bebe kokoa noho ny maina fotsiny ny sms. Ny s ny fomba tonga lafatra ny hahafantatra ny hafa tsara kokoa dia ho fampisehoana fa izy no tena zava-dehibe aminao sy ny afaka manao zavatra hafa ny olona tsy. Ny zazavavy rehetra nahy hanatona azo tsapain-tànana ny famaranana ny olona asa, ka ho marin-toetra miaraka aminy ary aza manome na dia ny fahafahana mameno ny ambiny. Raha tena te-handresy ny hatsaran-tarehy s-po ianao dia tokony ho ny lehilahy ny asa sy ny fanapahan-kevitra. Izany dia midika hoe mampihetsi-po ny fifandraisana hatrany, mamorona drafitra sy ho famoronana.
Misy ny fifandraisana misy karazana iray art
Aza adino fa vehivavy tsirairay tia manolotra. Ny lanjan ireo fanomezana dia tsy dia manan-danja toy ny zava-misy ny hihaino azy. Afaka hitondra ny voninkazo na ny filaminana ny voninkazo delivery, mividy tapakila amin’ny cinema (na raha toa ianao ao amin’ny firenena samy hafa afaka mandeha any amin’ny sarimihetsika miaraka amin’izay koa, ary avy eo dia diniho ny momba ny film), hanolotra ny boky raha toa izy tia mamaky na mahafatifaty mug dia ho raisina amin’ny lehibe fahafinaretana. Raha toa ianao ka handeha hamangy azy (ny hevitra lehibe, satria misy zazavavy dia t want a lavitra fifandraisana sy fampanantenana ho avy haharitra mandrakizay), dia tokony miezaka ny mandresy lahatra azy ny tarehiny. Izany dia ny lehibe plus point raha manana fijery lehibe amin’ny voaharatra ny tavako na marina volombava.
Kely rehetra manao zavatra feno sary
Ary raha ny ankizivavy no liana amin’ny fifandraisana dia hahatsapa ianareo fa ho avy ny fahitana voalohany, dia ny filan’ny, tsiky, sy ny feo afaka manome anao mihoatra vaovao noho ny taona maro ny sms hafatra. Tsy tokony mandany fotoana miaraka amin’ny olona, mitsidika isaky ny firenena, hahatakatra kolontsaina, na ohatra, maka lavitra ny fahatelo. Miezaka hahita izay fahafahana handresy ny fony sy voalohany indrindra raiki-pitia ny tenanao. Izy tokoa reciprocates mba toy izany ny toe-tsaina, dia ho sarotra ho azy ny hanohitra tsara toy izany ny olona ary aza raiki-pitia. Ny tovovavy toy ny harena ankasitrahany ny fahasahiana. Tsarovy fa ny zavatra rehetra dia ao amin’ny — tanana, aza milavo lefona
← Chines Roulette
Soso-kevitra ho an'ny Fiarahana Vehivavy Shinoa Mampiaraka Soso-kevitra →